9 Cách Sửa Bàn Phím Laptop Bị Liệt Tại Nhà Nhanh Chóng | Muasalebang - Muasalebang
9 Cách Sửa Bàn Phím Laptop Bị Liệt Tại Nhà Nhanh Chóng | Muasalebang
Đang Đọc: 9 Cách Sửa Bàn Phím Laptop Bị Liệt Tại Nhà Nhanh Chóng | Muasalebang in Muasalebang
Ikhibhodi I-laptop ikhubazekile, ayikwazi ukuthayipha ngokuphelele ngenxa yezizathu eziningi ezahlukene. Uma unenkinga encane ngekhibhodi ye-laptop yakho, sicela ubhekisele ezindleleni zokulungisa ikhibhodi ekhubazekile ekhaya kulesi sihloko.
1 Iphutha lekhibhodi yekhompyutha ephathekayo inokhiye bezinombolo abakhubazekile
1.2 Indlela yokulungisa
2 Ikhibhodi yekhompyutha ephathekayo inenkinobho engu-1 ekhubazekile ngenxa yomthelela wangaphandle
2.2 Indlela yokulungisa
3 Ikhibhodi ikhubazekile ngenxa yoketshezi oluchithekile
3.2 Indlela yokulungisa
4 Iphutha lomshayeli lenza ikhibhodi ingakwazi ukuthayipha
4.2 Indlela yokulungisa
5 Iphutha lekhibhodi ngenxa yokukhiya umsebenzi
5.2 Indlela yokulungisa
6 Iphutha elingukhiye ngenxa yendawo enamanxeba, ukunqanyulwa
6.2 Indlela yokulungisa
7 Ikhompyutha inegciwane
7.2 Indlela yokulungisa
8 Isikhathi eside sokusebenzisa ikhibhodi
8.2 Indlela yokulungisa
9 Setha kabusha ikhibhodi
10 Iseluleko sokukhetha ilaptop esezingeni eliphezulu kwaNguyen Kim
Iphutha lekhibhodi yekhompyutha ephathekayo inokhiye bezinombolo abakhubazekile
Iphutha lekhibhodi yenombolo ingesinye sezimo ezivamile. Ezikhathini ezinjengalezi uvame ukucabanga ukuthi ikhibhodi i-laptop okhubazekile. Nokho, akunjalo, lokho kungenxa yokuthi ngenkathi uyisebenzisa, ushaye ngephutha ukhiye “Numlock” (Num lk). Uma lo khiye uvaliwe, kusho ukuthi okhiye benombolo ngeke basetshenziswe.
Kulokhu ukulungisa kulula kakhulu. Udinga nje ukucindezela inkinobho ethi “Numlock” kukhibhodi. Bese ubheka ukuze ubone ukuthi isibani sesiginali sivuliwe yini, uma kunjalo, ungasisebenzisa ngokujwayelekile. Esimeni lapho, ikhibhodi yakho ayifakelwe isibani esikhomba inkinobho ethi “Numlock”, bese uchofoza kuyo bese uthayipha ukuze uyihlole.
Ukwengeza, uma ufuna ukuvula noma ukukhiya yonke ikhibhodi yekhompuyutha ephathekayo, ungakwazi ukuyibuka ngokushesha Ivula / Ikhiye Ikhibhodi yeLaptop Windows 7/8/10, Macbook Ngokushesha lapha!
I-Laptop Acer Aspire 3 A315-56-502X elungiselelwe kahle i-i5-1035G1 ene-4GB RAM iphatha imisebenzi eminingi kahle ukusiza ukufunda ku-inthanethi nokusebenza ekhaya ngempumelelo
I-laptop ye-Dell Inspiron 5570 M5I5238W inesikrini esikhulu esingu-15.6-inch Full HD esine-4GB, 1TB Hard drive ukuze isebenzise ngempumelelo izinhlobonhlobo zamasofthiwe nezinhlelo zokusebenza ukuhlangabezana nezidingo zokufunda – ukusebenza ekhaya.
Ikhibhodi yekhompyutha ephathekayo inenkinobho engu-1 ekhubazekile ngenxa yomthelela wangaphandle
I-laptop ngemva kwesikhathi eside isetshenziswa izoba nothuli. Uma ungakwenzi njalo ukuhlanza i-laptop, ukuhlanza ikhibhodi khona-ke uthuli lungabangela ukuthi ikhibhodi yekhompuyutha ikhubazeke. Ngoba izimbobo ezingaphansi kokhiye zigcwele izintuli, okwenza ikhibhodi ingakwazi ukusebenzisana. Ngaphezu kwalokho, iqiniso lokuthi amasampula okudla, izinsalela zephepha eziwele ngephutha kukhibhodi ngaphandle kokuqaphela nakho kungaba yimbangela.
Uhlu olusuka kolodwa kuya kwabathathu okhiye: Kulesi simo, indlela yokulungisa ikhibhodi ye-laptop ekhubazekile ukukhipha ikhava yokhiye bese uhlanza imilenze yokhiye, uhlanze ukungcola. Uma unolwazi olwengeziwe, ungasebenzisa futhi i-screwdriver ukususa zonke izikhiye, sebenzisa indwangu eyomile bese uxubha konke ukungcola.
Ngekhibhodi engakhipheki, ungakwazi ukuvala ikhompuyutha ephathekayo. Bese usebenzisa ikhithi yokuhlanza ikhompuyutha ephathekayo ezinikele ukuhlanza ikhibhodi kancane.
Esimeni lapho i-laptop yakho inokhiye abaningi abakhubazekile futhi ungazi ukuthi uhlakazwa kanjani umshini, sicela ulethe esikhungweni esiseduze sokuhlanza nokulungisa ikhompuyutha ephathekayo ukuze uthole ukwesekwa.
Ikhibhodi ikhubazekile ngenxa yoketshezi oluchithekile
Umkhuba wokusebenzisa itiye, ikhofi noma iziphuzo lapho usebenza, ukusebenzisa ikhompuyutha ephathekayo kuyaqondakala. Ngakho-ke, ngesikhathi sokusetshenziswa, uchithe amanzi ngephutha kukhibhodi. Lesi futhi ngesinye sezizathu zokuthi kungani ikhibhodi ye-laptop ikhubazekile.
Into yokuqala okudingeka uyenze ukwenza noma ukuvala idivayisi ngokushesha. Uma idivayisi ishaja, yikhiphe ngokushesha. Ikakhulukazi, ungayinyakazisi i-laptop ngamandla ukuze uthukulule amanzi ngoba kuzokwenza amanzi asakazeke kakhulu.
Uma inani lamanzi elichithiwe kukhibhodi lingeningi: Ungasebenzisa ithawula lephepha ukuze ubambe amanzi kancane. Bese usebenzisa isomisi Ukuze wome, naka izinga lokushisa elilungile ukuze ugweme ukulimaza ikhompuyutha ephathekayo.
Uma inani lamanzi noketshezi liningi kakhulu: Kulokhu, kufanele ukhiphe ikhibhodi futhi womise ibhodi lesekhethi yekhibhodi nekhibhodi bese uyibuyisela kabusha. Uma ukwenza ngale ndlela, kodwa ikhibhodi ayikwazi ukusetshenziswa, i-IC ingase yonakaliswe. Udinga ukuthenga enye i-IC ozoyishintsha. Kodwa-ke, le ndlela ingeyalabo abanolwazi oluningi, uma ungazi kanjani, ungaletha idivayisi esikhungweni sokulungisa ukuze uthole ukwesekwa.
Iphutha lomshayeli lenza ikhibhodi ingakwazi ukuthayipha
Umshayeli onephutha ungenye yezimbangela ezijwayelekile zokungasebenziseki kwekhibhodi yelaptop ephukile. Ngalesi sikhathi, indlela yokulungisa ikhibhodi yelaptop enezinkinobho ukuthi udinga ukubuyekeza umshayeli wekhibhodi.
Kulokhu, udinga nje ukuvuselela umshayeli wekhibhodi. Sicela ulandele lezi zinyathelo:
– Isinyathelo 1: Iya kubha yokusesha kukhompyutha yakho ephathekayo, thayipha “Isiphathi Sedivayisi” bese uchofoza.
– Isinyathelo sesi-2: Kumphathi Wedivayisi, thola “Amakhibhodi”. Bese uchofoza kwesokudla bese ukhetha okuthi “Buyekeza Umshayeli”
– Isinyathelo sesi-3: Okulandelayo, khetha “Sesha ngokuzenzakalelayo umshayeli”. Kuleli qophelo, isistimu izosesha ngokuzenzakalelayo umshayeli wakamuva futhi ikufakele yona.
Iphutha lekhibhodi ngenxa yokukhiya umsebenzi
Mhlawumbe ohlelweni lokusebenzisa ikhompuyutha ephathekayo ucindezele ngephutha inhlanganisela yesinqamuleli. Lokhu kuvimbela ikhibhodi yakho ukuthi ingakhiyi futhi kunika amandla umsebenzi othi “Yenza ikhibhodi ibe lula ukuyisebenzisa”. Ukuze wazi ukuthi ukhiye wonakele ngenxa yalesi sizathu noma cha? Sicela uyihlole ngemuva kokuqala umshini. umugqa wokhiye bomsebenzi Ingabe phezulu kungasetshenziswa? Uma umugqa ongaphezulu wokhiye usasebenziseka, kodwa izinkinobho zohlamvu nenombolo zingasebenzi, kungenxa yephutha lekhibhodi yokuvala umsebenzi.
Ukuze ulungise ikhibhodi ekhubazekile ngenxa yephutha lokukhiya, sicela ulandele izinyathelo ezilandelayo.
– Isinyathelo 1: Okokuqala, iya kokuthi “Qala”, bese ukhetha “Izilungiselelo” bese ukhetha “Ukufinyelela Kalula”.
.- Isinyathelo 2: Okulandelayo, khetha “Ikhibhodi”. Ngaphansi kokuthi “Sebenzisa Okhiye Besihlungi” ngaphansi kokuthi “Ziba ukushaywa kokhiye okufushane noma okuphindaphindiwe futhi ushintshe izilinganiso zokuphinda zekhibhodi”, hudula inkinobho ukuze uvule “Vula”. Bese, susa umaki wokuhlola ebhokisini elithi “Bonisa isithonjana Sezihluthulelo Zokuhluza kubha yomsebenzi”.
Iphutha elingukhiye ngenxa yendawo enamanxeba, ukunqanyulwa
Ngesikhathi sokusetshenziswa isikhathi eside, kungenzeka ukuthi indawo enqatshelwe ngaphansi kwesihluthulelo ibizwa ngokuthi ukhiye awukwazi ukuthayipha. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka futhi ukuthi isifunda sokuxhuma siphukile noma sishisiwe, ngakho-ke ukhiye awukwazi ukusetshenziswa.
Esimweni lapho indawo enqatshelwe ngaphansi kwesihluthulelo ingenasici, udinga nje ukukhipha inkinobho futhi uhlanze phansi ikhibhodi ekhubazekile kanye nezihluthulelo ezingomakhelwane.
Uma ikhibhodi ishisiwe, uxhumano luphukile: Kumele ususe ikhibhodi ye-laptop futhi uthole indawo yezihluthulelo ezikhubazekile ebhodini lesifunda. Sebenzisa ipensela engu-5B ukulandelela isekethe ephukile. Bese usebenzisa i-silicone glue noma i-conductive glue ukumboza le sekhethi.
Esinye isizathu okungenzeka ukuthi kungani ikhibhodi yekhompuyutha ephathekayo ikhubazekile ingasakwazi ukusetshenziswa igciwane. Iqiniso lokuthi ikhompyutha yakho ephathekayo ithola igciwane ngephutha ngesikhathi sokusetshenziswa njengokulanda isofthiwe, noma ukuvakashela amawebhusayithi anegciwane. Amagciwane ekhompyutha azongena ohlelweni, enze okhiye bekhompuyutha bangakwazi ukuthayipha. Ngokuvamile lokhu kungenye yezimbangela ongavamile ukuzinaka.
Ukuze ukwazi ukulungisa isimo sephutha lekhibhodi ngenxa yethonya lamagciwane ekhompyutha, ungasebenzisa izindlela ezilandelayo.
Vimbela amagciwane ukuthi angangeni ohlelweni lwekhompyutha yakho ngokufaka isofthiwe ukususwa kwegciwane ngomshini. Njengamanje, kunezinhlelo zokusebenza eziningi ezisebenzayo zokulwa namagciwane ongazibhekisela ku-inthanethi noma ngamaqembu ukuze wabelane ngolwazi lwe-IT.
Ngemva kokufaka isofthiwe elwa namagciwane, sicela uzame ukuyihlola futhi. Sicela uqalise uhlelo futhi, bese emva kwalokho setha kabusha ikhompuyutha ukuhlola ukusebenza kwekhibhodi.
Isikhathi eside sokusebenzisa ikhibhodi
Esinye sezizathu ezenza ucabange ukuthi ikhibhodi ye-laptop ikhubazekile impilo yekhibhodi. Noma iyiphi idivayisi izoba nesikhathi sayo sokuphila. Mhlawumbe, ikhibhodi yakho isinesikhathi eside isetshenziswa, ngakho ikhubazekile futhi ayisebenzi.
Kulesi simo, ungasebenzisa indlela yokulungisa ngokususa ikhibhodi nokuhlanza uthuli. Uma ngemva kokuzama, ukufaka kabusha, ikhibhodi isasebenziseka, cishe udinga ukufaka esikhundleni sesethi entsha yokhiye. Ngoba, impilo yokhiye isifike endaweni lapho ingakwazi ukuhlangabezana nezidingo zokusetshenziswa. Uma ushintsha ngokushesha ikhibhodi entsha ukuze wenze inqubo yokusebenzisa ikhompuyutha ephathekayo ibe bushelelezi. .
Setha kabusha ikhibhodi
Uma ngeshwa ngolunye usuku uyisebenzisa, ikhibhodi yekhompuyutha ephathekayo yakho ikhubazekile futhi ayikwazi ukusetshenziswa. Ungakhathazeki kakhulu, ungasebenzisa ngokushesha ukulungisa okusheshayo ekhaya ngale ndlela elandelayo:
Isinyathelo 1: Chofoza inkinobho ethi “Qala”, bese uthola bese ukhetha “Isiphathi Sedivayisi:”.
Isinyathelo sesi-2: Kuwindi leSiphathi Sedivayisi, chofoza into ethi “Buka”. Bese ukhetha okuthi “Bonisa Amadivayisi Afihliwe”
Isinyathelo sesi-3: Okulandelayo, sicela Yehlela esigabeni sekhibhodi. Bese uchofoza kwesokudla bese ukhipha yonke into ethi “HID Keyboard Device” ngokuchofoza inkinobho ethi “Khipha”.
Ngemva kokuthi Ukukhipha sekuqediwe, qala kabusha ikhompuyutha yakho. Ngemva kokuqalisa kabusha, ikhompuyutha ephathekayo yakho ephathekayo izoba nephutha langaphambilini lokukhubazeka kwekhibhodi.
Ngokungeziwe kulezi zindlela ezingenhla, ikhibhodi yekhompuyutha ephathekayo ikhubazekile ngenxa yokwehluleka kwehadiwe. Izindlela ezilimele ngesikhathi sokusetshenziswa ngumkhiqizi. Kulokhu, sicela ulethe idivayisi esitolo osithenge ngaphambili ukuze uhlole iwaranti ngokuvumelana nemithethonqubo.
Iseluleko sokukhetha ilaptop esezingeni eliphezulu kwaNguyen Kim
I-Dell Laptops: Ihlala isikhathi eside ngemishini esebenza kahle kakhulu elungele ukudlala imidlalo nokufunda nokuzijabulisa njenge Ingxenye G3, I-Dell Vostro 5402.
I-laptop ye-Fujitsu: ulayini I-laptop ye-Ultrabook Izacile kakhulu futhi ilula ngokuxhumeka okuphezulu, ifakwe izimbobo eziningi zokuxhuma ezifana nalezi: I-Fujitsu UH-X i7-1165G7 13.3 inch 4ZR1C14470.
Ngenhla kunezindlela ezilula nezilula zokulungisa ikhibhodi ye-laptop ekhubazekile ekhaya. Ungabheka bese uzama ukufaka isicelo sokuyilungisa. Ngikufisela inhlanhla.
Nguyen Kim Shopping Centre ezweni lonke
Xem Thêm Đánh giá chi tiết laptop Dell Latitude 3450 | Muasalebang
Đánh giá chi tiết TOP 5 kem chống nắng Whoo bán chạy nhất hiện nay | Muasalebang
Hướng dẫn cách ghi âm cuộc gọi trên iPhone đơn giản | Muasalebang